Home Wararka Farmajo oo la bilaabay in dadka laga celiyo Bal arag waxa Xalay...
Farmajo oo la bilaabay in dadka laga celiyo Bal arag waxa Xalay ka dhacay Nayrobi.
Waxaa Bilaabatay in Madaxweyne Farmaajo uu amro in dadka gaar haan kuwooda ay suuragal tahay inay ku buuqaan markuu u sheego wax aysan qaadan karin oo caqliga diidayo laga celiyo inay kulmaan.
Dhinaca kale MW Farmajo waxaa uu bilaabay nuu dadKa Somaliyeed ka cabsado inuu soo hor istaago, waxaana mar waliba lagu qabtaa soo dhaweyntiisa hal qol oo waliba mugdi.
Dalka Kenya xaflad soo dhaweyn ahayd xalay waxaa Safaaradda iyo Ciidanka Boliiska lagu amray inaysan soo deyn dadkii faraha badnaa ee la casuumay xafladda oo rabay inay ka soo qeyb galaan xaflad lagu soo dhaweynayo Madaxweynhooda, Laakiin Balal Cusman ayaa waxaa uu boliiska Kenya u sheegay inay ku buuqi karaan Madaweynaha. Kadib waxaa bannaanka lagu celiyey dhammaan shacabkii u yimid inay madaxweynaha soo dhaweeyaan oo aad u tira badnaa , waxaana hal qol oo mgdi ah loo soo geliyey xoogaa qaraabadiisa ah.
MOL xog ay ka heshay safaaradda waxay sheegeysaa in safaaradda hawshii lagala wareegay oo lagu amray inay faraha kala baxdo kuna wareejiso Balal Cusman.
Markii ay dad badan ay isa soo tubeen bannaanka si u dhageystaan madaxweynahaooda ayaa Waxaa laga baqay inay ku buuqaan madaxweynaha sababtoo ah lacagta farah badan ee la lunsaday ee ah $42M. Haddaba Balal Cisman oo ay madaxweynaha qaraabo yihiin waxaa ku amray safaaradda inay farah kala baxdo maamulka xafaladda, waxaana Shacabkii loo isticmaalay boliiska Kenya ee la dacdareeyey ay hadda eed u haystaan safaaradda oo talada lagala wareegay balsa aysan ogeyn arrintaas.
Halkaan ka daawo muuraal dhameystiran oo ay soo daaysay RTN
Previous articleMaamul Goboleedyada oo shardi ku xiray iney wadahadal la furaan Madaxda Dowladda
Next articleFarmaajo oo kulan qaasa la qaatay ganacsatada beesha Mariixaan ee ku dhaqan Neyroobi. Muxuu kala hadlay?
[Sheekh Sharif] Farmaajo ayaa amray weerarka naluga soo qaaday.